Swiss-Belhotels Iraisampirenena mihanaka mahery vaika any Afrika
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Swiss-Belhotels Iraisampirenena mihanaka mahery vaika any Afrika
Jona 18, 2018
Swiss-Belhotel International dia nametraka paikady fanitarana mahery vaika ho an'i Afrika. Nanao izany fanambarana izany i Laurent A. Voivenel, filoha lefitra zokiny, Operations and Development ho an'ny Moyen Orient, Afrika ary India ho an'ny Swiss-Belhotel International, nanao hoe: "Ny tanjonay dia ny hananana trano fandraisam-bahiny dimy any Afrika amin'ny 2021. Vao avy nanao sonia fitantanana izahay fifanarahana tamin'ny Zanzibar Crown Hotel sy Resort Limited hampandeha ny Swiss-Belresort Zanzibar tsara tarehy izay heverina fa hisokatra amin'ny asa aman-draharaha amin'ny taona 2019. Anisan'ireo toeram-pandraisana iraisam-pirenena vitsivitsy hiasa ao amin'ny nosy izy io. Ankoatr'izay, izahay dia mifampiraharaha amin'ny tetik'asa mahatalanjona sasany any amin'ny faritra hafa amin'ny kaontinanta. ”
Raha niresaka momba ny mety ho fananan'i Afrika ho an'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny i Laurent dia nanambara izy fa: "Africa dia tsena mahafinaritra satria mbola eo am-piandohany ary be ny toerana azo fitomboana. Ny indostrian'ny fizahantany dia nohamafisin'ireo mpandeha an-trano sy avy ao anatiny. Ny fitomboan'ny fitsangatsanganana any Afrika dia mahaliana manokana ho an'ny sehatry ny fandraisam-bahiny satria farafahakeliny efatra isaky ny mpitsangatsangana 10 any Afrika dia avy ao amin'ilay faritra. Nisy ihany koa ny fitomboan'ny mpitsidika avy any Shina sy India. Mandritra izany fotoana izany dia mahita fiovana isika avy amin'ireo mpanao dia lavitra mankany amin'ireo mpandeha fialamboly. Manodidina ny 69% amin'ny fandaniana amin'ny dia any Afrika tamin'ny taon-dasa no nataon'ireo mpandeha fialan-tsasatra, ary ny ambiny kosa dia orinasa. ”
Nanampy koa i Laurent hoe: "Ny fifandraisana tsara kokoa, ny fidirana amin'ny seranam-piaramanidina lafo vidy, ary ny firenena maro kokoa izay mandray fitsangatsanganana tsy misy visa ao anatin'ny faritra no antony lehibe iray hafa mitarika fitomboan'ny indostrian'ny hotely manerana ny kaontinanta. Ankoatr'izay, misy tsy fahampian'ny trano fandraisam-bahiny antonony marobe eto Afrika, ary rehefa mihabe ny saranga antonony, dia mahita ny fangatahana trano ambony takatry ny volany izahay, izay mazoto manararaotra anay ao amin'ny Swiss-Belhotel International. ”
Tamin'ny famelabelarana ny fironana manjaka eo amin'ny sehatry ny fandraisana olona any Afrika, dia nanantitrantitra i Laurent fa: "Miova eto Afrika ny indostrian'ny fampiantranoana nentim-paharazana. Ny fironana miakatra sy midina dia tsikaritra manerana ny kaontinanta. Marika iraisampirenena maro kokoa no nanomboka niditra an-tsena ary ny tanjonay dia ny hametraka ny Swiss-Belhotel International ho safidy tsara indrindra amin'ireo orinasa puce blue manome valiny ambony, lanja tsy azo resena ary traikefa tsy hay hadinoina. Ireo mpitsangatsangana, indrindra ny taranaka an'arivony taona, dia mitady traikefa ary ny trano fandraisam-bahiny dia mila mazoto miasa amin'ny famoronana ireo traikefa tsy manam-paharoa ho an'ny vahininy. Mila mihaino ny mpanjifa ny indostria amin'ny toerana misy banga sy fampiroboroboana ny tsena izay mila fitomboana. ”
Ny sehatry ny fandraisana vahiny any Afrika dia mijanona ho matanjaka ary vonona ny hitombo hatrany ao anatin'ny dimy taona ho avy. Raha ny filazan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO) dia tonga 8% niavaka ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena tamin'ny taona 2017 tany Afrika izay nahatratra 62 tapitrisa. Ny fahatongavana dia nitombo 13% tany Afrika Avaratra, raha nitombo 5% kosa ny fahatongavan'i Afrika Atsimon'i Sahara. Ity firoboroboana mahery vaika ity dia antenaina hitohy amin'ny taona 2018. Ny indostrian'ny fandraisam-bahiny dia nitondra $ 165.6bn - na 7.8% - tamin'ny harin-karena faobe any Afrika tamin'ny 2016 ary nitombo 2.9% izany isa izany tamin'ny taona 2017 raha ny isa navoakan'ny World Travel & Tourism Council. Mandritra izany fotoana izany dia nitombo avo roa heny ny fivoaran'ny hotely namboarina tany Afrika nanomboka ny taona 2009, avy amin'ny efitrano 30,000 amin'ny trano fandraisam-bahiny 144 ka hatramin'ny efitra 73,000 amin'ny trano fandraisam-bahiny 417.
Yangon Airways: fananan'ny mpivarotra zava-mahadomelina ary manitatra noho ny teknolojia frantsay vaovao?
Fikambananan'ny fizahan-tany eran-tany Twin Cities haorina ao amin'ny PATA Travel Mart 2018